यस्तो बन्यो ‘चौका दाउ’ को आईटम सङ्ग, किन भनिन् बर्षा राउतले छोटो ड्रेस लाउदिन ? (भिडियो) – An Online Entertainment News Portal
HomeEntertainmentयस्तो बन्यो ‘चौका दाउ’ को आईटम सङ्ग, किन भनिन् बर्षा राउतले छोटो ड्रेस लाउदिन ? (भिडियो)
June 12, 2018 sutraentertainment Entertainment, Event, Kollywood, News, Videos 0
करिब ३२ दिनदेखि छायांकन सुरु भएको फिल्म ‘चौका दाउ’ को यतिबेला छायांकन तिव्र गतिमा भैरहेको छ । सोमबार राति यो फिल्मको गीतको धमाधम छायांकन भएको हो । मध्येराति धापसीस्थित छायांकनस्थलमा थुप्रै चर्चित कलाकारहरु गीतको तालमा कम्मर मर्काउन व्यस्त देखिन्थे । यो फिल्ममा पुराना कलाकार सन्तोष पन्त, तैयव साहदेखि बर्षा राउतसम्मको अभिनय रहेको छ । यो फिल्म चर्चित तथा वरिष्ठ संगीतकार शम्भुजित वाँसकोटाका छोर सौयजित वाँसकोटा र मनोज भण्डारीले निर्माण गरेका कारण पनि थप चर्चामा छ । फिल्मको डान्सिङ नम्बर तथा आईटम सङ्गमा सन्तोष पन्त, तैयव शाह, विल्सन विक्रम राई, रविन्द्र झा, बर्षा राउत लगायतको अभिनय रहेको छ ।
कमेडी जनरामा निर्माण भैरहेको यो फिल्ममा बर्षा राउत पनि नृत्य गर्दैछिन् । तर, उनले यो आईटम सङ्ग भएपनि आफू भने छोटाछोटा लुगा लगाएर नाच्न नलागेको उनले बताईन् । उनले अहिलेसम्म आफू छोटो र ओपन भएको लुगामा आईटम डान्स गर्न कन्फिडेन्ट नभएको बताईन् ।